Free Software na Nkeonwe Software: Uru na ọghọm maka Nhọrọ Gị | Site na Linux
Free Software vesos Private Software: Uru na ọghọm maka nhọrọ gị
Kwa afọ, ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ (Ndị Mmepe na Ndị Ọrụ) na-aga n'ihu na arụmụka dị mkpa ma Software efu (SL) na Open Source (CA), ọkachasị ihe niile metụtara GNU / Linux duo, nwere ma ọ bụ rụzuo oke, idowe onwe ya dị ka ihe ọzọ ga - abụ Software nke Onwe (SP) na Koodu mechiri emechi (CC), ọkachasị ihe niile metụtara Microsoft / Apple Duo, ma na Homelọ na Nzukọ.
Oge ọ bụla nke arụmụka na-eweta arụmụka ọhụụ ya, echiche ya, ihe mkpali, onyinye na ihe ndị na-adịghị mma. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu a na-apụghị ịgbagha agbagha na SL / CA na-enwetawanye mkpa, mkpa na ogo nke iji na ndị ọrụ, ma na Homelọ na na Nzukọ. Ọ bụ ezie na n’ikpeazụ ihe niile gwụchara dabere na onye ị jụrụ na onye jiri ihe na ihe. Agbanyeghị uru na ọghọm enwere ike ịchọpụta nke ọma na sọftụwia abụọ a.
Maka ndị anyị na-agbanye mmiri mgbe niile Na ụwa nke SL, anyị enweghị obi abụọ ọ bụla banyere nnukwu ọganihu o nwegoro maka ojiji, mkpokọta na nchekwa, n'etiti ọtụtụ ebe ndị ọzọ. Ya mere, anyị nwere ike ikwubi n'ụzọ dị mfe na foto niile dị ezigbo nkwa.
O doro anya na mmeghe, mmekorita na ụkpụrụ ụkpụrụ nke SL Community nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye, na ndị ọzọ n'oge ndị a ebe nka nke ọrụ azụmaahịa nke na-esonye n'ụzọ zuru oke ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke World of SP / CC nwere ekele, ghọta, na ịnakwere ma kwenyesie ike na onyinye nke World of the SL / CA, na oru oma.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ekwenyeghị nke ahụ, ma na-egbu oge ma ọ bụ gbochie mgbe niile na SL, yana Linux, ababeghị na de facto Desktọpụ nke ọtụtụ ndị Kọmputa nke ọtụtụ ndị ọrụ, ụlọ na azụmahịa, ohere nke ihe ịga nke ọma na-eto eto ka SL na GNU / Linux nwee mmeri na Desktọpụ nke onye ọrụ nkịtị.
Na nkenke, n'ezie n'ime afọ iri na-abịanụ, anyị ga-ahụ Homlọ na nzukọ niile na nyiwe kọmputa dabere na echiche SL / CA., karisia ka ikesa ozi na ihe ohuru na-agbasawanye.
Acqu nweta ihe dị ala: Ulo oru mbu na SL / CA bu ihe pere mpe karia nke SP / CC. Na ọkwa onye ọrụ ọ ga-adabere na Nkesa Linux ahọrọ. Na ọkwa sava, a ga-enwe nchekwa pụtara ama mgbe niile n'ihi ikikere nke os na sistemụ arụnyere.
Isi koodu nweta: Unlimited ma ọ bụ quasi-na-akparaghị ókè nnweta na ohere na isi iyi koodu mee mgbanwe ndị dị mkpa, mgbanwe, mmegharị ma ọ bụ degharịa site na anyị onwe anyị programmers.
Ezigbo Nkwado: Nnukwu obodo dị njikere inye azịza ma ọ bụ dọkụmentị na ụdị ọnọdụ niile na SL / CA. Na mgbakwunye, site n'ọtụtụ akwụkwọ ozi elektrọnik, ndepụta nzipu ozi na enyemaka dị.
Ezi nkwụsi ike na nchekwa: Sistemụ arụmọrụ na Ngwa dabere na SL / CA anaghị adịkarị mfe ngwanrọ ngwanrọ dịka nje, malware, spyware, ransomware, n'etiti ndị ọzọ.
Ezigbo Njikọta: Ọ gụnyere ọrụ ndị dị mkpa maka njikọta na nyiwe ndị ọzọ nwere ikike, iji jikọta nke ọma na gburugburu IT dị ugbu a.
Enwere ike iji akụrụngwa nwere ike ịnweta: SL / CA na-arụ ọrụ oge ochie karịa HW ma ọ bụ nke oge a mana ọ na-arụ ọrụ (dị ọnụ ala), yabụ nwelite na SL / CA apụtaghị na ụgwọ HW ọgbara ọhụrụ ma ọ bụ nke ugbu a.
Mfe iji wụnye: Na mkpokọta, sistemụ arụmọrụ SL / CA taa yana Ngwa nwere ike ibilite ma na-agba naanị obere ajụjụ na obere oge ntọala / ntọala.
Ndakọrịta ụfọdụ SW / HW: Ọ bụghị SW / HW niile nwere nkwado SL / CA ma ọ bụ ndakọrịta, mana ọdịiche ha na ha na-ata oge, ọ dịkwa ihe ndị ọzọ nwere ezi uche.
Ogologo mmụta mmụta: Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikwa sistemụ arụmọrụ yana Ngwa dabere na SP / CC, ma n'ụlọ ma na nzukọ, yabụ ndị ọrụ ọhụụ maka sistemụ arụmọrụ na ngwa dabere na SL / CA nwere ike ịchọ ọzụzụ ka mma karịa, n'oge okenye.
Nguzogide ịgbanwe na ikike mmadụ (ndị ọrụ, ndị ọrụ aka na ndị njikwa): Na mbu na ọkachasị ndị ọrụ ga-enwe ihe isi ike ịnabata mgbanwe ọ bụla, iji zere mbọ dị ukwuu nke mmụta na mmegharị. Nke a na-emekwa na ọkwa nke ụfọdụ ndị ọrụ IT. Na ọkwa nke ndị njikwa, a na-elekarị mmetụta dị na ọkwa Oge / arụpụta ọrụ anya ebe a naghị achịkwa usoro mmejuputa nke ọma.
Nkwado pụrụ iche na Multimedia na Entertainment: N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị dị elu ma ọ bụ ndị ọkachamara pụrụ iche n'iji sistemụ arụmọrụ na ngwa dabere na SP / CC maka njikwa / ojiji nke ọdịnaya dị iche iche ma ọ bụ egwuregwu na-agbasakarị mmejuputa usoro okike na-aga nke ọma na sistemụ arụmọrụ yana Ngwa dabere na SL / AC. Ọtụtụ oge nwere nkwado dị mma na nke a n'ihi na n'ọnọdụ ndị a, SP / CC na-enwekarị nnukwu uru.
SLwa SL / CA nwere ọtụtụ uru dị mkpa iji tụọ ụwa SP / CC. Agbanyeghị, n'etiti ọtụtụ ihe, dịka ọmụmaatụ, ekwesighi ikwenye a priori na iji mmemme SL / CA ga-echekwa anyị ego ma ọ bụ belata ụgwọ site na ụbọchị mbụ nke mmejuputa na ojiji. Mana n'ezie ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ iji nweta ezigbo nloghachi na itinye ego (ROI) ma chekwaa ego na ogologo oge, iji SL / CA nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma ịtụle.
Ihe siri ike dịka ego ị ga-enweta site na ụgwọ ikikere na mmetụta dị ala nke nsogbu na nkwụsị kpatara malware na mmemme obi ọjọọ ndị ọzọ na-enye anyị SL / CA Ha na-akwado ezi ihe ịga nke ọma na njem ọ bụla iji mejuputa ya n'okpuru atụmatụ dị mma.
Gosiputa mmemme SL / CA na nyiwe di iche iche, Dika ndi oru jiri otutu otutu ngwa ndia n'okpuru Windows / Mac-OS n'ihi onodu otutu ha, o nwere ike buru uzo bara uru nke mere na nchikota na nghota nke SL / CA abughi ihe di egwu ma obu anagide.
Ogologo ndụ ngwanrọ na Open Source.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Free Software vesos Private Software: Uru na ọghọm maka nhọrọ gị
WiPhone: ekwentị na-emepe emepe nke enwere ike ịhazi site na EDI
Linux Foundation ekwuputala mgbakwunye nke ndị ọhụrụ 34